Yan Naing on Sun Nov 28, 2010 5:27 pm
This Group is the highest members of this Forum.They can do everything here.
This Group is the second highest group of this forum.They can create Announcements , Sticky , Delete , Close , etc.. They have the authority on the members .
This Group is the moderation group of the Forum.They also have the authority on the members.
This Group is the special members of the forum n they got some special permissions.
Last edited by Yan Naing on Sun Nov 28, 2010 7:38 pm; edited 1 time in total
Re: Permisson Of The MODERATION GROUPS
Yan Naing on Sun Nov 28, 2010 5:34 pm
ဒီအုပ်စုကတော့ ဖိုရမ်ရဲ့  အုပ်ချူပ်မှု့ကို အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူထားတဲ့ အဖွဲ့ပါ။အမြင့်ဆုံးအဆင့် ပါ။
ဒီအုပ်စုကတော့ ဖိုရမ်ရဲ့  ဒုတိယအဆင့်မြင့် အုပ်စုပါ။ members များအပေါ်မှာ အုပ်ချူပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။
ဒီအုပ်စုကတော့ ဖိုရမ်ရဲ့  အုပ်ချူပ်ခွင့်အဖွဲ့မှာပါ ပါတယ်။ members များအပေါ်မှာ အုပ်ချူပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။
ဒီအုပ်စုကတော့ ဖိုရမ်ရဲ အထူးအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ပါ။ ဖိုရမ်ကို အပြည့်အ၀ ကူညီပေးတယ့် သူတွေအတွက်ပါ။ သူတို့ကတော့ အထူးအခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။